Date My Pet » Ahoana ny Job A Man Afaka Hampahafantatra ny Romantic toetrantsika
Ahoana ny Job A Man Afaka Hampahafantatra ny Romantic toetrantsika
Okay, mba hahafantatra ny fomba fanandroana dia nampiasaina ho an'ny taona mba hanombanana toetra sy milaza mifanentana mifototra eo amin'ny fampifanarahana ny planeta?
... Amin'ny zavatra toy ny rehefa teraka ireo, ary na ianao ho "famantarana rano" na ny "famantarana masoandro?"
Tsara, Lasa aho rafitra toy izany koa mifototra eo amin'ny lehilahy ny gig.
Marina izany: ny andalan-ny asa, raha tsy mety na tsy ny roa aminareo "asa" ao amin'ny fiarahana sy ny fivadiany kianja filalaovana.
Na dia ny rafitra tsy ho tena "siantifika,"Ny filazana marina ataon be dia mifototra amin'ny fanamarihana, fandinihana, fandikana, ny dinidinika sy ny fandaniana fotoana voarakitra vitsivitsy saha "voalavo."
Raha te-haka ny hiheveranao azy, izay asa avy amim-pahombiazana hahazatra ny amin'ny, amin'ny vokatra maharitra, mamaky sy manaraka.
Mpanoratra sy poeta (The artsy karazana)
Ireo olona miezaka ny manonofinofy, tantaram-pitiavana, ary ny firotsahana. Dia hahita ny ohabolana feno ny fitaratra tahaka ny sasany. Matetika ry zareo lehibe conversationalist, ary tena mahafinaritra ny mifanerasera aminy. Ry zareo ny lehilahy dikan-ny namana tsara indrindra. Fa mitandrema: ireo "fanahy maimaim-poana" ho fanoloran-tena indraindray phobic sy hanjavona.
Raha miaraka aminao ny mpampianatra, mifindra any amin'ny lohan'ny ny kilasy.
Na dia misy sasany maningana ny fitsipika, olona izay mampianatra izay miavaka dia tsara fanahy, marary, tsara ny biby sy ny ankizy, ary izy ireo dia "fianarana faingana." Ampiana ao izany ny hoe lehibe izy ireo multi-taskers amin'ny fahaiza-manao mihoatra noho ny salan'isa Fandresen-dahatra.
Bola SY NOMERY CRUNCHERS
Lehilahy eo amin'ny sokajy ireo no misy matetika ny nentin-drazana karazana. Afaka "manisa" Izany cuties ho tsipiriany mirona, marim-potoana, ary vola koa pinchers. Izy ireo fitsipika sarotiny. Raha toa ka ianao ho any amin'ny fatra-paniry laza, mahitsy-Nampiana, azo ampiharina karazana, hahita fahasambarana eto.
POLISY, FIREMEN, SY Lehilahy mpitsabo mpanampy
Inona vavy tsy te ho "voavonjy?"Ry zalahy ao amin'ireo sehatra ireo no fantatra fa ho be herim-po, miaro, manam-pahefana, ary ny fikarakarana. Ary nomeko milaza ry zareo matetika amin'ny toe-javatra ara-batana tsara? Ny ankamaroan'ny olona dia tena mirona, amin'ny voninahitra sy ny fahatsapana andraikitra.
Mahita azy ireo ianao mba ho "mitovy" mpiara-miasa ao amin'ny fifandraisana.
Ianao tsindrio amin'ny fanahy ireo, raha mirindra tsara ianao, nilaza, introverted, ary hamaha olana tsara; koa izy ireo.
NY mitaiza tsy an'asa
Fa ndao hatrehina izany, fantatsika rehetra na mitondra ny datin 'ny olona iray ao amin'io sokajy io.
Ny "asa" dia moonlighting toy ny farafara ovy.
Ity ny teny.
Dia mbola miezaka ny "mahita ny tenany." Na dia teo foana ny vintana. Sa mbola miezaka ny hanaraka ny nofiny ny ho vatolampy kintana amin'ny telo-polo. Right? Raha izany, dia azonao atao ny handinika ny safidy sy ny "mavokely taratasy mi-" azy tsy ho ela.
BLUE vozon'akanjoko VS. MPIASA AMBONY LATABATRA–Ilay tsara lavitra?
Fanapahan-kevitra, fanapahan-kevitra. Inona no Atao hoe tovovavy hanao?
Moa tsara kokoa ny mampiaraka ny vozon'akanjoko manga fotsy ny olona, ​​na vozon'akanjoko cutie?
Tsara, izany rehetra izany dia miankina.
Ity ny 4-1-1.
Blue vozon'akanjoko matetika ry zalahy dia nidina tety an-tany sy ny tsara amin'ny tànany. Matetika ry zareo mora ny miaraka, miaraka amin'ny mitovy aminy mifehy. Oharina, ry zareo amin'ny ankapobeny nametraka kokoa indray.
White vozon'akanjoko fotoana maro ry zalahy no nahazo hery anaty lehibe, miezaka ny atidoha, ary hamaha olana lehibe.
Na ireo tsy mafy sy ny fifadian-kanina fitsipika, mahita azy ireo ianao azo ampiharina amin'ny toe-javatra maro mampiaraka. Na inona na inona ataonao, misafidy amim-pahendrena.
Sady koa anie, ny fitiavana dia zava-dehibe "raharaha."